Uhlela njani iifoto ze-Instagram: iinkqubo kunye nokusetyenziswa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | 07/06/2021 16:12 | Ukuhlaziywa ukuba 07/06/2021 16:14 | Ukufota
Okwangoku, enye yeendlela zonxibelelwano ezikwimfashini kwaye zibonakaliswa ngokubeka phambili umfanekiso ngaphezulu kokubhaliweyo yi-Instagram. Wonke umntu uneakhawunti kwaye ulayishe iifoto, nangona kuphela ezo zisemgangathweni ezizoyisayo. Kungenxa yoko le nto uninzi lujonga amaqhinga okwazi ukuhlela iifoto ze-Instagram.
Ukuba ukwolo khangelo kwaye ufuna ukwazi indlela yokufumana okuninzi kwiifoto zakho kwi-Instagram (Ukuba ufumana abalandeli abaninzi, ukuba uphawu luyakuqaphela, njl. Njl.) Emva koko jonga izinto esizilungisileyo.
1 Inyathelo lokuqala lokwahlula ngeefoto zakho kwi-Instagram
1.1 Iifilitha ze-Instagram ezonyusa iifoto zakho
1.2 Izinketho ze-Instagram
2 Ii -apps zokuhlela iifoto ze-Instagram
2.1 Uhlela njani iifoto kwi-Instagram:
2.4 Uhlela njani iifoto ze-Instagram: Lightroom
2.5 I-Adobe Photoshop Touch
Inyathelo lokuqala lokwahlula ngeefoto zakho kwi-Instagram
I-Instagram ayisiyo "inethiwekhi encinci yentlalo." Namhlanje kukho ngaphezulu kwe-60 yezigidi zeefoto mihla le, ezenza ukuba iiposti zakho ziphantse zingabonakali ukuba awuzenzi kakuhle. Ukubuya, unokufikelela ngaphezulu kwesigidi se-500 sabasebenzisi abakuso.
Uyifumana njani? Ewe, nangona kubonakala kunzima, kukho izinto ezinokwenziwa, ayisiyiyo kuphela indlela yokuhlela iifoto ze-Instagram, kodwa nezinye izinto, ngamanye amaxesha, esingazinanziyo, njengokusebenzisa ubungakanani obuchanekileyo beefoto, okanye iividiyo. Okanye uthathe iifoto ezisemgangathweni kwaye unxulumene neakhawunti esinayo.
Injongo yakho akufuneki ibe kukufota iifoto kwaye uzixhome ngokukhawuleza. Kodwa banike ugqibe lobungcali. Kwaye oko akuthethi ukuba nomyili emva kwakho ukuphinda abambe yonke into, okanye umfoti oqeqeshiweyo; kodwa jonga ezinye iinkcukacha njengokuqaqamba, umahluko, amacebo okucoca ulwelo, njl.
Iifilitha ze-Instagram ezonyusa iifoto zakho
Ngaphambi kokuba uthethe ngezicelo ezikunceda uphinde ufake iifoto zakho ze-Instagram, kuya kufuneka wazi izixhobo ekubonelelwa ngazo ziintanethi, andithi? Kule meko, sigxila kokucocayo.
Kwi-Instagram unexabiso elincinci lokucoca ulwelo oluphucula umgangatho wefoto yakho. Kuxhomekeka kukhetho lwakho, kuya kubakho ezinye onokuthi uzithande ngaphezulu okanye ngaphantsi. Umzekelo, kunye noClarendon uneethoni ezinzulu ngakumbi kwizithunzi, eziphucula ukukhanya kweefoto. Okanye nge-LARK, ekunikezela ngefoto ngokususa ukugcwala okungaphezulu.
Zonke iifilitha ze-Instagram ziyatshintsha kwaye ziphucule imbonakalo yomfanekiso wakho, kodwa zikhona nezinye iiparameter ezinokuwuphucula.
Xa ufaka ifoto kwi-Instagram, ayikuvumeli kuphela ukuba ubeke ifayile kwifoto; Unayo nevili elibonisa iiparameter zesithombe, kwaye ungazitshintsha ukuphucula umgangatho wazo. Zeziphi iiparameter? Sithetha ngokuqaqamba, ukugcwala, ukufudumala, umahluko, izithunzi ...
Ukuba uchitha ixesha elincinci ukwahluka loo datha, uya kuba nakho ukuhlela iifoto ze-Instagram ngaphandle kokufaka esinye isicelo. Umzekelo, kwiimeko ezininzi ukuthoba ukukhanya, umahluko kunye nezibane ukuya kuma-50 sele ziphucule ukubonakala komfanekiso. Yonke into ivavanya ukubona ukuba loluphi olona khetho lufanelekileyo kwifoto nganye oyilayishayo.
Ii -apps zokuhlela iifoto ze-Instagram
Ukuba ukhetha ukusebenzisa usetyenziso lokuphinda ubeke iifoto ze-Instagram endaweni yokhetho olunikezelwa yinethiwekhi, siye saqulunqa ezinye zezona zilungileyo. Ngabo uya kuba namathuba amaninzi okwenza iifoto ezizodwa, ke kuya kufuneka kuphela ixesha lokuvavanya kwaye ubone iziphumo.
Oku kunokwenza ukuba iakhawunti yakho igqame, kungoko ukuchitha ixesha elaneleyo lokuba neefoto ezisemgangathweni ezenza ifuthe kutyalo-mali kwixa elizayo, ngakumbi ukuba uqala ukubona abalandeli bakho benyuka.
Uhlela njani iifoto kwi-Instagram:
Siqala ngesicelo sokuba Ijolise ngqo kwiifoto ozifaka ku-Instagram. Kule meko, unokwenza ikholaji okanye ubeke amacebo okucoca ulwelo, imida, utshintshe ubungakanani beefoto, ukongeza isicatshulwa ...
Ayinayo imfihlakalo eninzi kwaye kulula ukusebenzisana nayo, nangona into oyifunayo icace ngakumbi, inokusilela.
Esi sicelo sesinye sezona zilungileyo kukuhlela iifoto ze-Instagram, okanye nakuphi na okunye ukusetyenziswa ngokubanzi. Uya kuba neefilitha ezininzi ezisemgangathweni kunye nezixhobo, kodwa kunye nezinye eziza kutshintsha ngokupheleleyo iifoto zakho.
Nangona le app isimahla, kukho ingxelo ehlawulelweyo enezixhobo eziphambili, ukucwangciswa kwangaphambili kunye nezinye iinkcukacha, ukuba uphumelele, kuya kuba kufanelekile ukuba ubhalisele.
Iyafana ne-VSCO, kodwa inethuba lokukwazi ukulungelelanisa iithoni, ukuba neefilitha ezininzi kunye nokuphucula iifoto kwiinkcukacha zabo ezincinci. Unenguqulo yasimahla, kodwa kukwakho necala elisecaleni elithi, ngokucacileyo, liphucule elidlulileyo.
Yintoni i-Snapseed engcono kuyo? Kulungile ikunika uhlengahlengiso lwe-HDR, ekubeni ikwazi ukufaka ii-caption, ineefreyimu ezininzi ...
Uhlela njani iifoto ze-Instagram: Lightroom
Le app ikuvumela ukuba uphinde ufake iifoto kwinqanaba lobuchule. Ngapha koko, igqibelele kangangokuba ungenza ukuba olo hlengahlengiso ludlule kwinkqubo yekhompyuter. Ngesi sizathu, abaninzi banika usetyenziso ithuba.
Kwaye yintoni onokuyenza ukuhlela iifoto ze-Instagram? Ewe, ukuqala, Ungaphinda ubeke ukukhanya kunye nombala, kunye nezinye iiparameter zesithombe ukuphucula ukukhanya, ubukhali, njl. Useto lwangaphambili kwaye unokwenza olwakho.
I-Adobe Photoshop Touch
I-Photoshop yenye yeenkqubo ezibaluleke kakhulu ekuhlelweni kwemifanekiso kwaye, ewe, kuye kwafuneka ukuba ibe nohlobo lwayo lweselfowuni. Kule meko, isixhobo silunge kakhulu kuba sikuvumela ukuba wenze into efanayo nekhompyuter.
Ewe, Yenzelwe abo sele benamava, kuba kwabasaqalayo isixhobo sinzima kakhulu ukusisebenzisa, ubuncinci ukufumana okona kulungileyo kwiifoto zakho.
Kwaye ngaphambi kokuba uzibuze, ineenguqulelo ezimbini, eyasimahla kunye nehlawulelwayo. Ukongeza, ine-app yee-smartphones kunye nolunye usetyenziso lweetafile. Ziyafana kakhulu, kodwa zigxile ekuphuculeni ukusetyenziswa kwazo zombini izixhobo.
Ukuba uneakhawunti ye-Instagram egxile kukutya, emva koko le app inokuba yeyona ilungileyo kuwe. Kwaye kugxile ekuphuculeni iifoto zezitya kunye nokutya.
Ungayifumana kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS kwaye isimahla. Ungenza ntoni ngayo? Kulungile uya kufumana amacebo okucoca iifoto zokutya (inezinto ezingaphezulu kwama-20 ezahlukeneyo) kunye nezinye izixhobo ezinjengokufiphala, ukukhulisa ubungakanani befoto, ukukhanyisa ukutya xa uthatha ifoto ...
KwiGoogle Play nakwiVenkile yeApple kukho ezinye izicelo ezininzi. Ingcebiso yethu kukuba uzame ezininzi ukufumana eyona ilungele isitayile osifunayo. Ngaba ucebisa ngokunye ukuhlela iifoto ze-Instagram?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Uhlela njani iifoto ze-Instagram